Mpanamboatra sy mpamatsy amplifier - China Amplifier Factory
LA SERIES 800W pro audio power amplifier 2 fantsona 2U amplifier
LA series power amplifier dia manana modely efatra, ny mpampiasa dia afaka mifanitsy mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpandahateny, ny haben'ny toerana fanamafisam-peo ary ny toetran'ny acoustique an'ny toerana.
LA series dia afaka manome ny hery fanamafisana tsara indrindra sy azo ampiharina ho an'ireo mpandahateny malaza indrindra.
Ny herin'ny vokatra isaky ny fantsom-pampana LA-300 dia 300W / 8 ohm, LA-400 dia 400W / 8 ohm, LA-600 dia 600W / 8 ohm, ary LA-800 dia 800W / 8 ohm.
CA SERIES 800W 2 fantsom-peo fanamafisam-peo pro
CA series dia andiana fanamafisam-pahefana avo lenta natao manokana ho an'ireo rafitra izay manana fitakiana avo lenta. Mampiasa rafitra adapter herinaratra CA-type izy, izay mampihena be ny fanjifana AC ankehitriny ary manatsara ny fahombiazan'ny rafitra mangatsiaka. Mba hanomezana anay vokatra azo antoka ary hampiakarana ny fahamendrehan'ny fiasan'ny fitaovana, ny andian-tsarimihetsika CA dia manana maodelim-bokatra 4, izay afaka manome anao safidy herin'ny output avy amin'ny 300W ka hatramin'ny 800W isaky ny fantsona, izay safidy maro karazana. Mandritra izany fotoana izany, ny andian-tantara CA dia manome rafitra matihanina feno, izay manatsara ny fampisehoana sy ny fivezivezan'ny fitaovana.
AX SERIES 800W fanamafisam-peo mahery vaika mahery vaika
Fanamafisam-pahefana andian-tsarimihetsika AX, miaraka amin'ny herinaratra sy teknolojia tokana, izay afaka manome ny fanatsarana efitrano fandraisam-bahiny lehibe indrindra sy azo tanterahina ary ny fahaizan'ny mpamily haingam-pandeha ambany kokoa ho an'ny rafitra mpandahateny amin'ny toe-javatra mitovy amin'ny vokatra hafa; ny haavon'ny herinaratra dia mifanitsy amin'ireo mpandahateny be mpampiasa indrindra amin'ny indostrian'ny fialamboly sy fampisehoana.
E SERIES Class D power amplifier ho an'ny mpandahateny matihanina
Lingjie Pro Audio dia nandefa ny fanamafisam-pahefana matihanina E-series, izay safidy farany mahomby indrindra ho an'ny fampiharana fanamafisam-peo kely sy salantsalany, miaraka amin'ireo mpanova toroidal avo lenta. mora ampiasaina izy io, miorina tsara amin'ny asany, lafo vidy ary be mpampiasa, manana toetra mampiavaka ny feo lehibe izay manome valiny matetika ho an'ny mpihaino. E series amplifier dia natao manokana ho an'ny efitrano karaoke, fanamafisana ny lahateny, fampisehoana kely sy salantsalany, lahateny amin'ny efitrano fivoriana ary fotoana hafa.
E-48 1100W pro fanamafisam-peo ho an'ny fanamafisam-pahefana mahery ho an'ny mpandahateny 15-inch
TRS ny andiany farany mampatanjaka andian-tsarimihetsika E dia mora ampiasaina, miorina amin'ny asa, mahomby ary marobe. Natao hampiasaina amin'ny efitrano fanaovana karaoke izy ireo, fanamafisana ny fiteny, fampisehoana kely sy salantsalany, lahateny amin'ny efitrano fivoriana ary fotoana hafa.
FP SERIES 1350W 4 fantsom-peo pro amplifier fanamafisam-peo matanjaka ho an'ny fampisehoana
Andian-tsarimihetsika FP dia fanamafisam-pahefana mahery vaika mihodina miaraka amina rafitra mirindra sy mirindra.
Ny fantsona tsirairay dia manana volam-pamokarana avo lenta tsy azo ovaina, mba hahafahan'ny amplifier mora foana miasa miaraka mpandahateny amin'ny haavon'ny herinaratra samihafa.
Ny fizaran-tany fiarovana dia manome ny haitao mandroso hiarovana ny boriborintany anatiny sy ny enta-mavesatra mifandray, izay afaka miaro ny fanamafisam-peo sy ny mpandahateny amin'ny toe-javatra faran'izay mafy.
Mety amin'ny fampisehoana lehibe, toerana, klioban'ny fialamboly avo lenta ary toerana hafa.
EVC-100 350W fanamafisam-peo mixer mixer karaoke amplifier miaraka amin'ny bluebooth
Ny vokatra lehibe indrindra dia ny tanjaka avo 350W x 2.
Sockets input microphone roa, hita eo amin'ny tontonana voalohany, ho an'ny mikrôfona tsy misy tariby ivelany na mikrôfôna tariby.
Tohano ny fibre audio, ny fahan'ny HDMI, izay afaka mahatsapa ny fandefasana feo tsy misy fampiasa amin'ny audio nomerika ary manafoana ny fitsabahan'ny tany amin'ny loharanom-peo.
FU450 450W efatra ao anaty tokana karaoke amplifier multifunction mixer amplifier miaraka amina microphone Wireless
FU andian-tsarimihetsika manan-tsaina efatra-in-iray manan-tsaina: 450Wx450W
Rafitra VOD misy efatra-in-iray (mifanaraka amin'ny rafitra EVIDEO Multi-Sing VOD) + fanamafisam-peo + mikrô tsy misy tariby + fanamafisam-pahefana ao amin'ny trano fialamboly audio-visual manan-tsaina
LIVE-2.18B 1800W pro audio power amplifier fanamafisam-pahefana mahery ho an'ny fampisehoana
LIVE-2.18B dia miaraka amina jack input roa sy jack jack output Speakon, afaka ampifanarahana amin'ny fampiasana sy ny takian'ny rafitra fametrahana isan-karazany izy io.
Misy ny fifehezana ny mari-pana amin'ny mpanova ny fitaovana. Raha misy tranga misimisy loatra dia hafana ny mpanova. Rehefa mahatratra 110 degre ny mari-pana, dia hikatona ho azy ny thermostat mba hifehezana ny mari-pana ary hanana andraikitra fiarovana tsara.
FU-2350 350W fanamafisam-peo karaoke amplifier fampiroboroboana varotra mafana
Fahatsapana fidirana / fidiran'ny fidirana: 9MV / 10K
7 tarika PEQ: (57Hz / 134Hz / 400Hz / 1KHz / 2.5KHz / 6.3KHz / 10KHz) ± 10dB
Valiny matetika: 1KHz / 0dB: 20Hz / -1dB; 22KHz / -1dB
Nomena fahefana: 350Wx2, 8Ω, 2U
Fandraisana fahatsapana / fidirana an-tsokosoko: 220MV / 10K
7 tarika PEQ: (57Hz / 134Hz / 400Hz / 1KHz / 2.5KHz / 6.3KHz / 16KHz) ± 10dB
Andian-tsarimihetsika nomerika: ± 5 andiany
Valiny matetika: 20Hz-22KHz / -1dB
Valin'ny matetika ULF: 20Hz-22KHz / -1dB
Refy: 485mm × 390mm × 90mm
CT-6407 / CT-8407 5.1 / 7.1 rafitra fantsona fampisehoana fampisehoana an-tsarimihetsika an-trano fampisehoana teatra an-trano
CT Series teatra fanamafisam-pahefana manokana no dikan-teny farany an'ny TRS audio amplifier fanatanjahan-tena miaraka amina switching key iray. Famolavolana endrika, atmosfera tsotra, akustika ary hatsaran-tarehy miara-monina. Hamarino tsara ny malefaka sy marefo ny feony afovoany sy avo, fanaraha-maso ambany ambany kokoa, feo tena izy sy voajanahary, feon'olombelona tsara sy manankarena, ary ny lokon'ny feo ankapobeny dia voalanjalanja tokoa. Fandidiana tsotra sy mety, asa miorina sy azo antoka, fampisehoana lafo. Drafitra mitombina sy tsara tarehy, mety ampiasaina amin'ny subwoofer passive mahery, tsy vitan'ny hoe afaka manao karaoke mora sy falifaly ianao, fa afaka mamela anao hahatsapa ny vokatry ny acoustic an'ny haavon'ny teatra matihanina. Hihaona amin'ny fifandimbiasana eo anelanelan'ny karaoke sy ny fijerena sarimihetsika, manaova mozika sy sarimihetsika hanana traikefa miavaka, ampy hanetsehana ny vatanao, ny sainao ary ny fanahinao.